Lasan’i Afganistana Ny Amboaran’ny Firenena Mpanao Kolikoly Indrindra · Global Voices teny Malagasy
Lasan'i Afganistana Ny Amboaran'ny Firenena Mpanao Kolikoly Indrindra	Voadika ny 15 Desambra 2012 12:37 GMT
Zarao: Afganistana no heverina ho ny firenena faran'izay mpanao kolikoly indrindra eto an-tany, milahatra mifanahantsahana amin'i Korea Avaratra sy Somalia tao anatin'ny fanadihadiana isan-taona ireo firenena 176 navoakan'ny Transparency International (TI) tamin'ny 5 Desambra. TI dia mpanaramaso ny kolikoly eran-tany manana ny foibeny ao Berlin izay mamoaka ny fandaharana ny kolikoly isan-taona. Tamin'ny fanadihadiana tamin'ny taona lasa, somary teo ambonin'i Korea Avaratra i Afganistana sy Somalia, nitovy laharana tamin'i Myanmar teo amin'ny faha-180.
“Amboaran'ny Firenena Faran'izay Mpanao Kolikoly Indrindra”
Noararaotin'ireo vondrona sivily Afgana ny fotoana namoahana ilay fanadihadiana mba hikarakarany famoriam-bahoaka hanoherana ny kolikoly. Famoriam-bahoaka toy izany no natao tany aminà faritany valo amin'ireo 34 ao amin'ny firenena. Ny tanjon'ireo hetsika dia ny “[hampiroboroboana] ny firaisam-pirenena, hanafoanana ny kolikoly, ary hitondràna fandriampahalemana sy fitoniana eo amin'ny firenena”
Ny 8 Desambra, ireo mpikatroka mafàna fo avy amin'ny fiarahamonina sivily ao amin'ny faritanin'i Bamyan (aka Bamiyan) dia nanolotra [fa] sary famantarana iray maneho ny filoha Afgana Hamid Karzai miaraka amin'ny ‘Amboaran'ny Firenena Mpanao Kolikoly Indrindra’.
Sarin'ny filoha Afgana, Hamid Karzai, miaraka amin'ny ‘Amboaran'ny Firenena Mpanao Kolikoly Indrindra’ tao Bamyan. Sary natolotr'i Mahdy Mehareen.
Mpiasa zokiolona iray manolotra an-tànana ilay amboara ho an'ilay sarintsarin'i Karzai. Sary natolotr'i Mahdy Mehareen.
Dawood Wasl, iray amin'ireo mpikarakara ny hetsika, dia niteny [fa] tao anaty tafatafa ho an'i BBC [fa] hoe:
Zava-misy henjana no hitanao fa ao anatin'ny 200 metatra [miala amiko], misy olona sasany miaina anaty lavabato nolavahana efa ho 2000 taona lasa tany, raha ireo Kabinetranà Ministera kosa mandeha mivahiny any ivelany mitentim-bidy an-tapitrisa dolara. Alina iray amin'ny fivahinianany [amin'ireo hotely vahiny raitra] dia efa mitentina lafo dia lafo tokoa mitovy sanda amin'ny tokony hahavitàna fialofana ho an'ireo izay mbola miaina anaty lavabato hatramin'izao.
Ny kolikoly no isan'ireo fanamby goavana atrehan'i Afganistana nandritra ny taompolo farany teo, izay mamely mafy tokoa ny sarangan'ireo tena mahantra eo amin'ny fiarahamonina, araka ny ambaran'ireo manampahefana miady amin'ny kolikoly ao amin'ny firenena.
Nanome fanampiana an-davitrisa dolara ho an'i Afganistana ireo firenena vahiny. Kanefa marobe ireo Afgana no mino [fa, pdf] fa betsaka tamin'ireo fanampiana ara-bola no lasa any anaty paoketran'ireo manampahefana ambony ao amin'ny governemanta. Ny filoha mpitarika ny “Transparency International” dia nihevitra hoe “maherin'ny 1 lavitrisa dolara amin'ny 8 lavitrisa dolara natolotra [ho an'i Afganistana] tato anatin'ny valo taona farany no very amin'ny kolikoly”.
Sorabaventy iray avy amin'ny “The Lantern”, mari-pamantarana milaza fa ireo mponina ao amin'ny faritanin'i Bamyan dia mbola tsy manana herinaratra. Sary avy amin'i Mahdy Mehareen.
Fanehoankevitr'ireo Mpisera anaty Aterineto
Nahatezitra ireo mpisera ety anaty aterineto ihany koa ilay laharana eran-tany misy an'i Afganistana amin'ny resaka kolikoly.
Humayoun Behzad nibitsika hoe :
@behzadjee: Fomba Fahitàna ny Kolikoly 2012 — Arahabaina Afganistana fa nahazo ny isa ambony indrindra ianao!!
Kawoon Khamosh nanoratra hoe:
@kwnmk: Tezitra: amin'ireo firenena 174, Afganistana no firenena maizina indrindra noho ny kolikoly Ary Rohullah Yakobi nibitsika hoe:
@kohandeh: Efa ofisialy io, Afganistana no firenena faran'izay mpanao kolikoly indrindra eto an-tany. Tsara ho an'Ing Kazai & ireo rehetra mpanohana azy izay
“Daily Outlook Afghanistan” nanazava ny antony mbola mampizizotra ny kolikoly:
Mihinana an'i Afganistana avy ao anatiny lalina [ny] kolikoly. Ny antony dia satria tsy nisy mihitsy ezaka mivaingana hamongorana azy ity tato anatin'ny iraikambinifolo taona lasa. Ireo izay voarohirohy tamin'ny fanodinkodinana dolara an-davitrisa dia miriaria malalaka ao anatiny sy ivelan'i Afganistana noho ny fifandraisany amin'ny sasantsasany amin'ireo mpanao politka manana tanjaka mavesatra lavitra noho ny lalàna Afgana.
Raha ny vondrona Facebook ho Fampihavanam-Pirenena Ao Afganistana kosa nanolotra vahaolana henjana amin'ny resaka kolikoly :
Tsy isalasalàna fa nitontona ho anatin'izany sokajy [farany ambany] izany i Afganistana, nefa inona no azo atao hanadiovana an'i Afganistana amin'ny kolikoly? Ny valiny dia ; tokony hànana mpitondra tsy manao kolikoly i Afganistana, mpitondra izay afaka hanapaingotra ireo mpanao kolikoly ary dia izay no ho vita ny amin'ny kolikoly eto Afganistana.
Sarin'ny filoha Afgana, miaraka aminà sary voalaza ho nanao kolikoly tamin'ny anarany. Sary natolotr'i Mahdy Mehareen.
Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: Ankoatr'i Mongolia izay mitovy laharana aminà firenena fito hafa eo amin'ny toerana faha-94, ny firenena hafa rehetra ao Azia Afovoany dia anatin'ireo 50 mpanao kolikoly indrindra eto an-tany ao anatin'ilay fandaharana farany nataon'ny TI. Faha-133 ao anaty lisitra i Kazakhstan amin'ireo firenena 176, mifampizara toerana amin'i Rosia sy firenena efatra hafa. Kyrgyzstan mifampizara toerana amin'i Ginea eo amin'ny faha-154. Tajikistan no faha-157, miaraka aminà firenena roa hafa. Turkmenistan sy Uzbekistan miaraka eo amin'ny laharana faha-170, eo ambonin'i Afganistana avy hatrany.
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraOmid Bidar
Tantaran'ny Azia Afovoany sy Kaokazy farany 6 andro izayTajikistanSazian'i Tajikistan ireo mpanakanto mpanitsakitsaka ny lalàm-pifamoivoizana
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, русский, македонски, Français, English
Azia Afovoany sy KaokazyAfganistana